Ukuprintwa kwe-3D kungabonelela abasebenzisi ngamacandelo okugqibela kwiintsuku nje ezimbalwa ukuqinisekisa ingcamango yoyilo, okanye ukubabeka ngokuthe ngqo ekusebenziseni, kunye nokwenza ixesha lokuthengisa ngokukhawuleza kunabo bakhuphisana nabo. Itekhnoloji yokushicilela ye-3D idlala indima ebaluleke kakhulu kwinkqubo yemveliso. Ingakhawuleza ifumane imodeli yemveliso, emva koko isebenzise imodeli kwimveliso ekhawulezayo. Le ndlela ibhetyebhetye kwaye isebenza ngokufanelekileyo, iyanciphisa ngokufanelekileyo iindleko zokubumba kunye nenkunkuma yemveliso, ufumane iimveliso ngexesha elifutshane kakhulu, ufezekise umphumo wokuphindaphinda.
Imveliso encinci yeBatch
Ukuprintwa kwe-3D imveliso encinci yebhetshi kunezibonelelo ezininzi: ubhetyebhetye obuphezulu, ukushicilela okukhawulezayo, iindleko eziphantsi, ukuchaneka okuphezulu, kunye nomgangatho ophezulu womgangatho. Ilungele ngokukodwa imveliso encinci yebhetshi yeemveliso ezinje ngobugcisa, ubuchule benkcubeko, ifilimu kunye nopopayi lweTV, kunye nezixhobo zesixhobo. Iyazoyisa iingxaki zexabiso eliphezulu, ukusebenza ngokusezantsi, kunye nomgangatho ongazinzanga obangelwa kukwenziwa kwemveli njengencwadana yemigaqo, i-CNC, inaliti yokubumba.
Umshicileli we-3D unokufezekisa prototyping ekhawulezayo esetyenziselwa ukuqinisekiswa kokubonakala, oku kubaluleke kakhulu kumanqanaba okuqala oyilo lwemveliso mveliso. Ukufaka idatha ye-3D kwiprinta ye-3D kunokuprinta ngokuthe ngqo imodeli yemveliso-ntathu, eyenza uyilo lube lolunomdla. Itekhnoloji yokuprinta ye-3D ilinciphisa kakhulu ixesha lokuvelisa, ngokungafaniyo nokuveliswa komngundo ovulekileyo ngokwesiko okanye okwenziwe ngesandla, inokunceda ngokukhawuleza nangokufanelekileyo iinkampani ukuba zifumane iziphene zoyilo lwemveliso kwinqanaba lokuqala.
Ukuqinisekiswa koyilo kubandakanya ukuqinisekiswa kwendibano kunye nokuqinisekiswa komsebenzi. Ingakhawuleza iqinisekise ubume bemveliso ukujonga ukuba uyilo lwemveliso lusengqiqweni kusini na kwaye ukuba uvavanyo olusebenzayo luyahlangabezana na neemfuno zokwenene zemveliso. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokuprinta i-3D kunokukhawulezisa umjikelo wophuhliso lwemveliso kunye nokuphepha iingxaki zexesha elide kunye neendleko eziphezulu ngenxa yokuvulwa komngundo.
Kwiindlela zemveli zokuvelisa, utyalomali kunye nophuhliso lomngundo zinendleko eziphezulu kakhulu kumashishini, kwaye ukuvela kwetekhnoloji yokuprinta ye-3D izisa iindlela ezimfutshane kwishishini lezixhobo zasekhaya. Ngokuprinta ngokukhawuleza kwe-3D prototyping ekhawulezayo, iinjineli zeR & D zinokuguqula ngokukhawuleza idatha yemilo-ntathu eyilwe yikhompyuter ibe yinto yokwenyani. Le nkqubo iphindaphindwe kalishumi kuneendlela zemveli zokuvelisa. Itekhnoloji yokuprinta ye-3D isetyenziselwa ukubonisa ubungqina kwimveliso kwinqanaba lokukhula kwemveliso, njengokuqinisekiswa kwembonakalo, ukuqinisekiswa kwendibano, kunye nemveliso encinci yebhetshi. Iyanciphisa iindleko zokubumba kuyo yonke inkqubo yokuvelisa, inciphisa ixesha lophuhliso lwemveliso kwaye ikhawulezise isantya sokuqaliswa kwemveliso entsha. Ngokuphucula iipropathi zezinto eziphathekayo kunye nokuphuculwa kwetheknoloji yokuprinta ye-3D, iteknoloji yokuprinta i-3D iya kusetyenziswa ngakumbi kwimveliso yeendawo zokugqibela zombane wasekhaya. Kwixesha elizayo, itekhnoloji yoshicilelo ye-3D iya kuphuhla ibhekise kwimveliso enkulu.
Ukuprintwa kwe-3D kubonelela ngesisombululo esigqibeleleyo se-Precision Medicine. Itekhnoloji yokuprinta ye-3D inokudibanisa imodeli enamacala amathathu ngokusekwe kwidatha ye-CT okanye ye-MRI yesigulana, emva koko uprinte imodeli yecala ngeprinta ye-3D, kwaye ufumane ngokukhawuleza imodeli yezonyango ngexesha elifutshane kakhulu. Isetyenziselwa uhlalutyo lwamatyala kunye nezikhokelo zoqhaqho ukufezekisa injongo yoyilo olubonakalayo, ukusebenza kancinci kokungenelela, ukwakhiwa ngokutsha komntu ngamnye kunye nonyango oluchanekileyo. Itekhnoloji yokuprinta ye-3D ibonelela oogqirha ngoqhaqho olunomdla ngakumbi kunye nolwazelelo lwangaphambi kokusebenza kunye nokulinganisa kokuhlinzwa, okunyusa ukuchaneka kotyando kunye nokunciphisa ngempumelelo umngcipheko wotyando. Ukongeza, ixabiso labashicileli be-3D bezonyango kwii-insoles zamathambo, izandla ze-bionic, izixhobo zokuva kunye nezinye izixhobo zokubuyisela kwimo yesiqhelo azilungiselelwanga kuphela, kodwa zikwabonakaliswa ikakhulu kukutshintshwa kweendlela zemveliso ngobuchwephesha bokuchopha obuchanekileyo nobusebenzayo, obufutshane kakhulu Umjikelo wemveliso kwaye uqinisekisa ukufumana iimveliso kwelona xesha lifutshane.
Ukuchwetheza ngobuchule. Inkqubo yedatha yoshicilelo ye-3D ekrelekrele eyenzelwe ngokukodwa amazinyo, adibanisa ukuseta okuzenzekelayo kunye nokongeza imisebenzi yenkxaso, ukubeka ngokuzenzekelayo, ukuxhasa ukuhanjiswa kweefayile kweWifi, kwaye inokuxhasa iiprinta ezininzi ze-3D ngaxeshanye;
Uyilo lomntu. Uchungechunge lweBulltech lweenkqubo zokuprinta ze-3D zinobukhulu obuncinci, ukusebenza ngokulula kunye nokuguquguquka okuphezulu, kufanelekile kuwo nawuphi na umsebenzi womsebenzi;
Ukhuselo lokusingqongileyo. Ukucoca nokunyanga inkqubo ezimeleyo kwenza lula inkqubo yomsebenzi kangangoko kunokwenzeka ukusuka ekukhetheni nasekubekeni ipallet yokushicilela, ukugcinwa kwitena yentlaka nokucocwa kweentsalela, ezisebenza ngokufanelekileyo nangokusingqongileyo.
Gqibezela isisombululo sedijithali. Ukusuka kuyilo lwe-CAD ukuya kwimveliso egqityiweyo yokuprinta i-3D, iBulltech ine-serie epheleleyo yezisombululo zokuprinta ze-3D, ejolise ekusebenziseni itekhnoloji yokuprinta ye-3D ukutshintsha iindlela zokulungisa amazinyo, ichaze imigangatho yokufaka isicelo sokushicilela kwidijithali kwi-dentistry, kwaye ifezekise iziphumo ezilungileyo ezilindelweyo.
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yoshicilelo ye-3D kuyilo lwezihlangu, uphando kunye nophuhliso, kunye nemveliso yokuphosa ikhule kakhulu. Okwangoku, itekhnoloji yokuprinta yeBulltech 3D ibuyisela ishishini kwizihlangu. Kuyakhawuleza, kuyasebenza kwaye kubhalwe igama lomntu ukwenza ukhuphiswano olutsha. Itekhnoloji yokuprinta ye-3D inokwenza lula inkqubo yokuqhubekeka. Ngokusekwe kwidatha enamacala amathathu, imveliso inokufumaneka ngokukhawuleza ngexesha elifutshane. Xa kuthelekiswa nenkqubo yokwenza izihlangu ngokwesiko, ikrelekrele ngakumbi, iyazenzekela, igcina abasebenzi, isebenza kakuhle, ichanekile kwaye ibhetyebhetye. Ngokuqhambuka ngokuthe ngcembe kwetekhnoloji kunye nezixhobo, siya kuqhubeka nokuphonononga ngokubonakalayo okunokwenzeka kwinqanaba lesicelo.
Imfundo enobuchule yabafundi yokuhlakulela amandla esizukulwana esilandelayo ekusebenziseni itekhnoloji yokuprinta ye-3D, ngelixa isomeleza ubuchule babafundi kunye nolwazi lokufunda nokubhala.
Ukuvela kwetekhnoloji yokuprinta ye-3D yenkcubeko kunye neyokudala kuya kuzisa utshintsho olukhulu kuyilo nakuphuhliso lweemveliso zenkcubeko kunye nezobugcisa, kwaye iya kuzisa nethuba elitsha lophuhliso. Iphula umda phakathi kwabavelisi kunye nabathengi. Phantse wonke umntu unokuba ngumyili kunye nomenzi. Ukuprintwa kwe-3D kunika abantu abaqhelekileyo amandla okuvelisa, kukhuphe amandla okuyila abasebenzisi ngabanye, kutshintshe amalungelo abantu abambalwa kuphela kwixesha elidlulileyo lokuyila nokudala, kwaye kuyakuqonda ukuyila okukodwa kunye neemfuno zokubonisa zabantu abaqhelekileyo, kwaye kufezekisa ngokwenyani. ubuchule babantu bonke. Ukuprintwa kwe-3D kwenza ukuba obu bulumko budibeneyo benziwe bube nkulu kwaye busetyenziswe, kwaye buya kukhuthaza uyilo loyilo lweemveliso zenkcubeko ukubonisa ngakumbi izinto ezahlukeneyo, ezithandwayo kunye nenkululeko.
Imodeli yoyilo eshicilelweyo ye-3D liziko elincinci elichaza ngokuthembekileyo ubume bengcinga yoyilo, evakalisa umbono oyingqayizivele woyilo ngalunye, ayenzi nje kuphela ukuba umxhasi abenombono ogqityiweyo weprojekthi ecetywayo, kodwa ikwanokubancinci , ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Izinto zoyilo zibuyisiwe, kwaye iimodeli zesikali ezichanekileyo ziyilelwe ukubonisa iinkcukacha ezichanekileyo kunye nezincinci.
Ukufaka i-3D kwitekhnoloji yokuprinta kuphando kunye nenkqubo yophuhliso lwenxalenye ezizenzekelayo zinokukhawuleza ziqinisekise ukusebenza komgaqo kunye nokwenzeka kwamalungu antsonkothileyo, angagcini nje kuphela ngenkqubo yophuhliso lokungunda, kodwa anciphisa ixesha kunye notyalo mali. Umjikelo wophando kunye nophuhliso lwamalungu emveli emveli ahlala ngaphezulu kweentsuku ezingama-45, ngelixa ushicilelo lwe-3D lunokugqibezela inkqubo yokuphuhlisa kunye nokuqinisekisa iinxalenye kwiintsuku ezi-1 ukuya kwezi-7, ezinokuphucula kakhulu uphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha. Ngaphezu koko, akukho mngundo uyafuneka kwinkqubo yokuphuhlisa iindawo ngoshicilelo lwe-3D, ezinokugcina iindleko ezininzi. Okwangoku, ukushicilelwa kwe-3D kusetyenziswa kwimoto ye-R & D kunye nokuveliswa kwetyala kunye neekhomponenti ezifakwe kwiigrilles zeemoto, iideshibhodi zemoto, imibhobho yokulungisa umoya, iintlobo zokutya, ii-injini hoods, iinxalenye zokuhombisa, izibane zemoto, amavili emoto, njl.
Itekhnoloji yokushicilela ye-3D ibonelela ngeendlela ezintsha zokuyila kunye neendlela zemveliso yeendawo ezahlukeneyo zokuvelisa, kwaye utshintsho olutsha olubangelwa koku ngokuthe ngcembe luye lwaba sisihloko esishushu sokuqwalaselwa ngabantu. Ngokusetyenziswa okunzulu kweendlela zokudala zokushicilela ze-3D, ubugcisa beplastikhi buya kuphefumlelwa ukuba buvelise iifom ezintsha kunye neelwimi, kuxhomekeke kwiikhompyuter njengeqonga lendalo, eliluncedo ekukhuthazeni ukuvelisa izinto ezintsha kunye nophuhliso.
Ngophuhliso olukhawulezayo lwetekhnoloji yoshicilelo ye-3D, ngokudityaniswa nokusetyenziswa kwetekhnoloji yecompyuter, uyilo lobume kunye nenkqubo yokuqulunqwa kokuchaneka ngokuchanekileyo, kuyilo kunye nokuveliswa koxinzelelo lwedini, ukubumba kwe-wax, ukuveliswa kweqokobhe, ukuvelisa okungundoqo, njl. isetyenziselwa ukuvelisa ukubekwa ngokuchanekileyo. Oko kuzise utshintsho olukhulu. Olona thuba luphambili lokushicilela i-3D yokuphosa ngokuchanekileyo kukuchaneka okuphezulu kunye nokugqitywa komphezulu, ke umsebenzi wokuchwetheza ungancitshiswa. Shiya nje isibonelelo sokusebenza machining kumacandelo aneemfuno eziphezulu, okanye nokuba kukhutshiwe. Isibonelelo sokugaya nokucoca sinokusetyenziswa ngaphandle kokuqhubekeka ngomatshini. Kuyabonakala ukuba indlela eyahlulayo yotyalo-mali inokonga izixhobo ezininzi zomatshini kunye nokusebenza kweeyure zomntu, gcina kakhulu izinto zentsimbi ekrwada, kwaye inobuhlobo kwindalo.
Iprototype linyathelo lokuqala lokuqinisekisa ukwenzeka kwemveliso ngokwenza isampulu ngaphambi kwemveliso emininzi. Isetyenziselwa ukukhangela ukuba imveliso iyazifezekisa na iimfuno zoyilo. Uncedo olubalaseleyo lweprototype 3D yomshicileli kukuba inokuvelisa ngokuthe ngqo iinxalenye zayo nayiphi na imilo ukusuka kwidatha yemizobo yekhompyuter ngaphandle koomatshini okanye nabuphi na ubumba, ngaloo ndlela kunciphisa kakhulu umjikelo wophuhliso lwemveliso, ukuphucula imveliso kunye nokunciphisa iindleko zemveliso. Xa kuthelekiswa netekhnoloji yendabuko, iindleko zincitshisiwe ngokushiya umgca wemveliso, kwaye inkunkuma yezinto iyancitshiswa kakhulu.
Idilesi:Inombolo ye-1177, iChunlan Road, iJinan, China